InokuSinceda njani isiNto seNtengiso ukuba silungiselele ikamva elingenaCooki? | Martech Zone
InokuSinceda njani isiXhobo seNtengiso ukuLungiselela iKamva elingenaXoki?
NgoLwesithathu, Septemba 29, 2021 NgoLwesithathu, Septemba 29, 2021 UAlbert Nieto
UGoogle kutshanje ubhengeze ukuba iyalibazisa izicwangciso zayo zokuphelisa ii-cookies zomntu wesithathu kwisikhangeli se-Chrome kude kube ngo-2023, unyaka kamva kunokuba bebecwangcisile. Nangona kunjalo, ngelixa isibhengezo sinokuziva ngathi linyathelo elibuyela umva kwidabi labucala babathengi, ishishini elibanzi liyaqhubeka nokucinezela ngezicwangciso zokunciphisa ukusetyenziswa kweicookies zomntu wesithathu. U-Apple usungule utshintsho kwi-IDFA (ID yabathengisi) njengenxalenye yohlaziyo lwe-iOS 14.5, efuna usetyenziso lokucela abasebenzisi ukuba banike imvume yokuqokelela nokwabelana ngedatha yabo. Ngaphezu koko, iMozilla kunye neFirefox sele bemisile ngenkxaso yeicookies zomntu wesithathu ukulandelela abasebenzisi kwizikhangeli zabo. Nangona kunjalo, nge-Chrome accounting ye phantse isiqingatha Kuzo zonke izithuthi zewebhu e-US, esi sibhengezo sisaphawula utshintsho lwenyikima kwii-cookies zomntu wesithathu.
Konke oku kukhokelela kwintengiso ekwi-Intanethi etyhalelweyo ukuba ivumelane newebhu eqhutywa ngasese ngakumbi, inika abasebenzisi bokugqibela ulawulo olungcono kwidatha yabo. Umda wexesha wowama-2022 wawusoloko unamabhongo, okuthetha ukuba eli xesha longezelelekileyo lamkelwe ngabathengisi kunye nabapapashi, njengoko libanikeza ixesha elininzi lokuziqhelanisa. Nangona kunjalo, ukutshintshela kwilizwe elingenakupheka akuyi kuba kukucima into enye, kodwa inkqubo eqhubekayo yabathengisi esele iqhubeka.
Ukususa ukuthembela kwiiKuki
Kwintengiso yedijithali, ii-cookies zomntu wesithathu zisetyenziswa ngokubanzi ziinkampani zobuchwephesha bentengiso ukufumanisa abasebenzisi kwidesktop nakwizixhobo zefowuni ngeenjongo zokujolisa kunye nokwenza ingxelo. Ngokusekwe kutshintsho kukhetho lwabathengi ngendlela idatha yabo eqokelelwa okanye esetyenziswa ngayo, iimveliso ziya kunyanzelwa ukuba zikhuphe ukuxhomekeka kwabo kwiicookies, batshintshele kwikamva elihlangabezana nemigangatho emitsha yemfihlo. Amashishini kwisithuba angasebenzisa eli xesha litsha njengethuba lokusombulula ezinye zeengxaki ezinxibelelene neicookies, njengokulayisha kancinci kunye nokusilela kolawulo kwidatha yomshicileli yamaqela abahleli, okanye ukuthelekisa ikuki phakathi kwamaqonga ahlukeneyo ababhengezi.
Ngapha koko, ukuthembela kwicookies kuye kwenza ukuba abathengisi abaninzi bagxile kakhulu kwizicwangciso zabo zokujolisa, bebabona bexhomekeke kwiimodeli zokuthandabuza ezithandabuzekayo kwaye bamkela iiyunithi zentengiso ezisemgangathweni ezinyanzelisa ukwenziwa kwentengiso. Rhoqo kunokuba kunjalo, ezinye iinkampani zeli candelo ziyalibala ukuba esona sizathu sokubakho kwentengiso kukwakha iimvakalelo ezakhayo kuye nakubani na onxibelelana nophawu.
Yintoni intengiso yomxholo?
Umxholo wentengiso unceda ekuchongeni amagama aphambili ahamba phambili kunye nokufikelela kubathengi ngohlalutyo olufana nolomntu (kubandakanya isicatshulwa, ividiyo, kunye nemifanekiso), indibaniselwano yabo, kunye nokubekwa kwabo ukuze bakwazi ukufaka intengiso ehambelana nomxholo kunye nokusingqongileyo kwephepha.
Umxholo wentengiso 101
Umxholo yeyona mpendulo ilungileyo kwaye inye kuphela efumanekayo kwinqanaba
Ngelixa iigadi ezibiyelwe ngodonga ziya kuhlala zikhetho kubathengisi ukuba banxibelelane nabathengi abanokubakho besebenzisa idatha yomntu wokuqala, umbuzo omkhulu ngowokuba kuya kwenzeka ntoni kwiwebhu evulekileyo ngaphandle kweicookies. Iinkampani ezikwicandelo lobuchwephesha bezentengiso zinokukhetha ezimbini: ukufaka ii-cookies endaweni yeetekhnoloji enye evumela ukuba zigcine ukubonwa kwiwebhu; okanye tshintshela kukhetho lokujolisa kuqala kubucala njengokuthengisa kwimeko.
Umzi mveliso weshishini lobuchwephesha usezinsukwini zokuqala zokuchonga isisombululo esifanelekileyo sehlabathi leqela lesithathu lecookie. Ingxaki ngecookie ayisiyo itekhnoloji yayo, kodwa kukusilela kwayo ngasese. Ngokukhathazeka ngasese kakuhle kwaye kumiliselwe ngokwenyani, akukho teknoloji isilelayo ukuhlonipha abasebenzisi iya kuphumelela. Ukujolisa kumxholo kusetyenziswa uLwimi lweNdalo ukuCwangciswa (NLP) kunye neArtificial Intelligence (AII-algorithms ayifumaneki kuphela kwaye inokusetyenzwa kwinqanaba, kodwa ikwabonisa ukuba iyasebenza njengokujolisa kwabaphulaphuli.
Isakhono seempawu zokuqonda umxholo osetyenziswa ngumsebenzisi ngexesha lokuhanjiswa kwentengiso kuya kuba sisazisi esitsha nesisebenzayo kubaphulaphuli ekujoliswe kubo kunye nokukhethwa kwabo. Ukujoliswa komxholo kudibanisa ukubaluleka kunye nesikali, ukuchaneka, kunye nokungabinamthungo okukhuthazwa yinkqubo yemidiya.
Ukuqinisekisa imfihlo yabathengi
Ngokwangasese, iintengiso zentengiso zijolise kwintengiso ejolise kuyo kwiindawo ezifanelekileyo ngaphandle kokufuna idatha evela kubathengi. Iyazixhalabisa ngemeko kunye nentsingiselo yeendawo zentengiso, hayi indlela yokuziphatha yabasebenzisi abakwi-Intanethi. Ke ngoko, icinga ukuba umsebenzisi ubalulekile kwintengiso ngaphandle kokuxhomekeka kwindlela abaziphethe ngayo. Ngohlaziyo lwexesha lokwenyani, ekujolise kuko kwimeko yenkampani kuya kuhlaziya ngokuzenzekelayo ukubandakanya imeko-bume entsha nefanelekileyo kwizibhengezo, ukuqhuba iziphumo eziphuculweyo kunye nokuguqulwa.
Olunye uncedo lweqhinga kukuba yenza ukuba abathengisi bahambise imiyalezo kubathengi xa beyamkela kakhulu imiyalezo yophawu. Umzekelo, xa umsebenzisi ekhangela umxholo malunga nesihloko esithile, oko kunokuthetha ukuba banomdla wokuthenga. Ngokubanzi, ukubanakho kweenkampani zeetekhnoloji yentengiso ukujolisa kwimeko ezinokuthi zenziwe kubalulekile, ngakumbi xa kusebenza kwiimarike ezithile okanye zentengiso.
Ixesha elizayo leeNtengiso
Ngomzi mveliso wobuchwephesha wentengiso kwindlela eya kwilizwe elingenakupheka, ngoku lixesha lokuziqhelanisa kwaye uqinisekise ukuba abathengi banakho ukubonelela ngokuqhutywa ngasese, abasebenzisi bokugqibela abanolwazi ngolawulo olungcono kwidatha yabo. Njengoko ujoliso lomxholo lubonakalisile ukuba luyasebenza ngohlaziyo lwexesha lokwenyani kunye nokwenza ubuqu, abathengisi abaninzi bayayifuna njengenye yeekuki zomntu wesithathu.
Uninzi lwamashishini luye lwaziqhelanisa ngempumelelo nexesha lokuchaza kwaye luye lwaphelela ekubeni lukhulu kwaye lunenzuzo ngenxa yoko. Ukudalwa kwe-intanethi, umzekelo, kudale amathuba ehlabathi kwiiarhente zohambo, kwaye abo balwamkelayo utshintsho bavela kwiinkampani zalapha ekhaya okanye zelizwe baba ngamashishini ehlabathi. Abo baluchasayo olu tshintsho, kwaye ababekanga abathengi babo kuqala, mhlawumbi abekho namhlanje. Icandelo lezentengiso alikho ngaphandle kwaye amashishini kufuneka achaze isicwangciso sabo ngasemva. Abathengi bafuna ukuba ngasese ngendlela efanayo abafuna ukubhukisha iiholide zabo kwi-intanethi-ukuba oku kunikiwe emva koko kuya kubakho amathuba amnandi kuwo wonke umntu.
Funda ngakumbi malunga noMxholo weTekhnoloji ye-AI yeMbewu
tags: yongezaiteknoloji yokuthengisaaikukubhadla okungeyonyaniimfihlo yabathengiIntengiso yomxholoCookieukungabinazonkacookiescookies zokuqalaiqela lokuqalacookies zokuqalaikamva leentengisoUkulungiswa kolwimi lwendalonlpwabucala
Imbewu yembewu yinkampani ehamba phambili yokuPapasha uMxholo eyenza izisombululo ezinempembelelo kunye nezibandakanya imixholo efanelekileyo yokubonwa kwepremiyamu, ukujolisa kwamandla kunye nembuyekezo yabapapashi abaphambili kunye neyona nto intle. Umxholo we-AI wenkampani uvumela ii-brand ukuba zibandakanye nabathengi ngaphakathi kwendalo yonke yomdla wabo ngaphandle kwecookie.
IHypeAuditor: Isitokhwe sakho seNtengiso seMpembelelo se-Instagram, iYouTube, iTikTok, okanye iTwitch